အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု က ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ဂွါတီမာလာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးပို့ခဲ့စဉ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကမ္ဘာတဝန်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ဦးဆောင် ကူညီဖို့ သံဓိဌာန်ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒီနေ့အထိ ကာကွယ်ဆေးသန်း ၁၁၀ ကျော်ကို ကမ္ဘာတဝန်းဖြန့်ဖြူးခဲ့ပြီး၊ နောက်ထပ် နိုင်ငံ ၁၀၀ ကျော်အတွက် ကာကွယ်ဆေးသန်း ၅၀၀ ကျော် ပံ့ပိုးဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ။ ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကို နှောင်ကြိုးမဲ့ လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Linda Thomas-Greenfield မကြာခင်က သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီစဉ်အတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေကြောင့် ထွက်ပြေးလာရသူတွေအပါအဝင်၊ စာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေအတွက် ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကျော်ထောက်ပံ့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သန်းကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Ned Price က အခုလိုပြောပါတယ်။
[ACT 1 0:09 – DALET: POLICY/ACTUALITIES]“COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးတကြီး လိုအပ်နေချိန်မှာ၊ အခုလိုအကူအညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောသွားတာပါ။”[END ACT]
ဒီထပ်ဆောင်းပေးတဲ့ ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၅ သန်းကို ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ စီမံကိန်းကို ပံ့ပိုးမှာဖြစ်သလို၊ ကိုဗစ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအားထုတ်ကျိုးပမ်းနေကြသူ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် အထောက်အကူပြုဖို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကိုတော့ လူမှုဒုက္ခ အကျပ်အတည်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ပံ့ပိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ သံအမတ်ကြီး Thomas-Greenfield ကပြောပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း ပံ့ပိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူလူချင်းစာနာမှုအကူအညီ ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကို နိုင်ငံတကာနဲ့ အစိုးရနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ မိတ်ဖက် ပရဟိတအဖွဲ့စည်းတွေကဆင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူအတွက် တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိခိုက်လွယ် ချို့တဲ့သူတွေ၊ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေရသူတွေအပါအဝင် ဒုက္ခသည် ၇ သိန်းကျော်အတွက် အရေးပေါ် စားနပ်ရိက္ခာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အကာအကွယ်ပေးရေး၊ အမိုးအကာ၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနဲ့ မိလ္လာသန့်ရှင်းရေး၊ တကိုယ်ရေသန့်စင်မှု စတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ဒီရန်ပုံငွေကို သုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတကြော ခိုလှုံနေကြတဲ့ အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို ကူညီနေကြတဲ့ ထိုင်း NGOs တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်သလို၊ ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့ သံအမတ်ကြီး Thomas-Greenfield. ကရှင်းပြပါတယ်။
အလှူရှင် တခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်း စာနာမှုအကူအညီ အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် ရက်လျောစွာပံ့ပိုးပေးကြပါရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအပြင် ကမ္ဘာတဝန်းလုံး ကပ်ရောဂါ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ အတူ အင်တိုက်အားတိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Linda Thomas-Greenfield ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုက ကမ်ဘာတဝနျး COVID-19 ကပျရောဂါကာကှယျရေးအတှကျ ဦးဆောငျ ကူညီဖို့ သံဓိဌာနျခမြှတျထားပါတယျ။ ဒီနအေ့ထိ ကာကှယျဆေးသနျး ၁၁၀ ကြျောကို ကမ်ဘာတဝနျးဖွနျ့ဖွူးခဲ့ပွီး၊ နောကျထပျ နိုငျငံ ၁၀၀ ကြျောအတှကျ ကာကှယျဆေးသနျး ၅၀၀ ကြျော ပံ့ပိုးဖို့ စီစဉျနပေါပွီ။ ဒီကာကှယျဆေးတှကေို နှောငျကွိုးမဲ့ လှူဒါနျးတာဖွဈပါတယျ။
ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာအမရေိကနျသံအမတျကွီး Linda Thomas-Greenfield မကွာခငျက သှားရောကျခဲ့တဲ့ ထိုငျးနိုငျငံခရီစဉျအတှငျး အမရေိကနျပွညျထောငျစုအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အကွမျးဖကျနှိပျကှပျမှုတှကွေောငျ့ ထှကျပွေးလာရသူတှအေပါအဝငျ၊ စာနာမှုအကူအညီလိုအပျနသေူတှအေတှကျ ဒျေါလာသနျး ၅၀ ကြျောထောကျပံ့မယျလို့ ကွညောလိုကျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကှယျတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ဒျေါလာ ၅ သနျးကူညီမှာဖွဈတယျလို့ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနပွောခှငျ့ရ Ned Price က အခုလိုပွောပါတယျ။
[ACT 1 0:09 – DALET: POLICY/ACTUALITIES]“COVID-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ ထိခိုကျနဈနာမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ထိုငျးနဲ့ မွနျမာနိုငျငံက ပွညျသူတှအေတှကျ လူသားခငျြးစာနာမှုအကူအညီတှအေရေးတကွီး လိုအပျနခြေိနျမှာ၊ အခုလိုအကူအညီပေးတာဖွဈပါတယျလို့ ပွောသှားတာပါ။”[END ACT]
ဒီထပျဆောငျးပေးတဲ့ ရနျပုံငှဒေျေါလာ ၅ သနျးကို ထိုငျးကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ ကိုဗဈကာကှယျဆေးထိုးတဲ့ စီမံကိနျးကို ပံ့ပိုးမှာဖွဈသလို၊ ကိုဗဈရောဂါတိုကျဖကျြရေးအားထုတျကြိုးပမျးနကွေသူ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုဖို့လညျး ပါဝငျပါတယျ။
ရနျပုံငှဒေျေါလာသနျး ၅၀ ကိုတော့ လူမှုဒုက်ခ အကပျြအတညျးတှရေငျဆိုငျနရေတဲ့ မွနျမာပွညျသူတှအေတှကျ ပံ့ပိုးမှာဖွဈတယျလို့ သံအမတျကွီး Thomas-Greenfield ကပွောပါတယျ။ စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး အကွမျးဖကျနှိပျကှပျမှုတှကွေောငျ့ အိုးအိမျစှနျ့ခှာထှကျပွေးကွရတဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေိုလညျး ပံ့ပိုးဖို့ဖွဈပါတယျ။
လူလူခငျြးစာနာမှုအကူအညီ ဒျေါလာသနျး ၅၀ ကို နိုငျငံတကာနဲ့ အစိုးရနဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ မိတျဖကျ ပရဟိတအဖှဲ့စညျးတှကေဆငျ့ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ မွနျမာပွညျသူအတှကျ တိုကျရိုကျထောကျပံ့မှာဖွဈပါတယျ။ ထိခိုကျလှယျ ခြို့တဲ့သူတှေ၊ ပွညျတှငျးအိုးအိမျစှနျ့ခှာ တိမျးရှောငျနရေသူတှအေပါအဝငျ ဒုက်ခသညျ ၇ သိနျးကြျောအတှကျ အရေးပျေါ စားနပျရိက်ခာ၊ ပိုငျဆိုငျမှု အကာအကှယျပေးရေး၊ အမိုးအကာ၊ ကနျြးမာရေး၊ ရနေဲ့ မိလ်လာသနျ့ရှငျးရေး၊ တကိုယျရသေနျ့စငျမှု စတဲ့လိုအပျခကျြတှအေတှကျ ဒီရနျပုံငှကေို သုံးစှဲမှာဖွဈပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ထိုငျး- မွနျမာနယျစပျဒသေတကွော ခိုလှုံနကွေတဲ့ အကူအညီလိုအပျနသေူတှကေို ကူညီနကွေတဲ့ ထိုငျး NGOs တှနေဲ့ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ လိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးပေးမှာဖွဈသလို၊ ကိုဗဈရောဂါကာကှယျရေးအတှကျလညျး အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျလို့ သံအမတျကွီး Thomas-Greenfield. ကရှငျးပွပါတယျ။
အလှူရှငျ တခွားနိုငျငံတှအေနနေဲ့လညျး စာနာမှုအကူအညီ အရေးပျေါလိုအပျနတေဲ့ မွနျမာပွညျသူတှေ အတှကျ ရကျလြောစှာပံ့ပိုးပေးကွပါရနျ အမရေိကနျပွညျထောငျစုက တိုကျတှနျးနပေါတယျ။ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးအနနေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံအပွငျ ကမ်ဘာတဝနျးလုံး ကပျရောဂါ အဆုံးသတျရေးအတှကျ COVID-19 ရောဂါတိုကျဖကျြရေးမှာ အမရေိကနျပွညျထောငျစုနဲ့ အတူ အငျတိုကျအားတိုကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွပါလို့ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာအမရေိကနျသံအမတျကွီး Linda Thomas-Greenfield ထပျမံတိုကျတှနျးလိုကျကွောငျးပါခငျဗြား။